एकतालाई जोगाउँन सबैले इमान्दारिताका साथ आत्मसात गर्नुपर्छ! « Media for all across the globe
एकतालाई जोगाउँन सबैले इमान्दारिताका साथ आत्मसात गर्नुपर्छ!
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको अन्तरसंघर्ष पार्टी विधि, बिधान र पद्धति संगत चल्नुपर्छ भन्नको लागि हो कि ब्यक्तिलाई मन्त्री बन्नलाई हो? यदि कुनै ब्यक्ति मन्त्री हुँदैमा मुल समस्याको समाधान हुन्थ्यो भने त कमरेड योगेश भट्टराई र कमरेड घनश्याम भुसाललगायतका कमरेडहरु मन्त्री बन्नु भएको थियो। त्यसपछि सम्पुर्ण समस्या समाप्त हुनुपर्ने हो तर, समाधान होईन झन भन्दा झन समस्या बढेको देखिन्छ।
गठित कार्यदलमा रहेका कमरेडहरूको नाम फेरि फेरबदल हुने मन्त्रीको रूपमा आइरहेको छ। यो कहिँ गुड देखाएर पिना चटाउने काम त होईन। आशा छ– त्यसो नहोस्। लडाइ विधि, विधान र पद्धतिको हो, नकि कसैलाइ मन्त्री र मुख्यमन्त्री बनाउन?
कार्यदलले आफ्नो सुझाव रिपोर्ट आफुलार्इ फाइदा वा नुक्सान आग्रह वा पुर्वाग्रह नजिक वा टाढा नभएर तथ्य र सत्यको आधारमा आउनेछ। गलतलाई गलत र सहिलाई सहि भन्न सक्नेछन् गल्ती गरेकालाई आत्मालोचना गराउन सक्ने छ र सहि बोलेकालाई सहि बोलेका हुन भन्न सक्नेछ। र यो जो–जो ले कार्यदल बनाउनु भयो वहाँहरुले इमानदारीका साथ कम्तीमा महाधिवेशन सम्म लागू गर्नुहुनेछ, भन्ने आशा र विश्वास गरेको छु।
नेकपा एउटा वर्गीय पार्टी हो त्यो वर्ग प्रति इमानदार छ गम्भीर छ। सबैको उन्नति प्रगति होईन वर्गको उन्नति प्रगति र समृद्धि प्रति सचेत छ। पार्टीको निति तथा कार्यक्रम र चुनावि घोषणापत्र हात्तीको देखाउने दात र खाने दात पक्कै हुनेछैन।
म पार्टीको एउटा इमानदार कार्यक्रर्ता भएकाले मेरो अनुरोध कार्यदलले बुझाउने सुझाव प्रतिवेदन नेकपा विधि, विधान पद्धति कमिटी प्रणालीबाट चल्नुपर्छ हरेक निर्णय दुइटा अध्यक्षले होईन कमिटीले गर्नुपर्छ। सबैले सामुहिक निर्णय र ब्यक्तिगत जिम्मेवारीलाई पालन गर्नु पर्छ।
कम्युनिस्ट पार्टी बुजुर्वा पार्टी होइन कम्युनिस्ट पार्टी हो त्यही अनुसार चल्नुपर्छ। अहिले कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार प्रति उठेका हरेक प्रश्न को जवाफ दिन सक्नुपर्छ। ब्यक्ति जतिसुकै सक्तिसाली भएपनि उ पार्टीको कारणले भएको हो भन्ने नभुलौ त्यसैले कमिटीको निर्णय मान्नुपर्छ र कमिटीको मातहत हुनुपर्छ भन्ने विधिलाई सबैले इमानदारीको साथ आत्मसात गर्नुपर्छ – भन्ने सुझाव सहित जावस।
हिजो हामीलाई यहि विधि विधान निति कार्यक्रम निर्णय र पद्धति सिकाएको थियोे मलाई लाग्छ अझै साहेद यो भन्दा अर्को कुनै सिस्टम भनेको छैन।
रावल – पूर्व एमाले निकट प्रवासी नेपाली भारतका महासचिब हुन्।